पीत पत्रकारिता नगर्न साँसद रावलको आग्रह – SaipalNews.com
पीत पत्रकारिता नगर्न साँसद रावलको आग्रह
पुस २३ काठमाण्डौँ । राजधानीबाट प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिकाले निरन्तर आफ्ना बिरूद्ध कपोल्कल्पित समाचार प्रकाशन गरिरहेको प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र २ का माननीय झपट रावलले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
साँसद रावल र नेकपाका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारीले पार्टीको एक करोड़ हिनामिना गरेको भन्दै समाचार प्रकाशन गरेपछिनेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका रावलले आफूले त्यस क्षेत्रका जनताका पक्षमा काम गरेकोबाट आत्तालिएर पार्टी बिरोधीकोउक्साहटमा साँघु साप्ताहिक र त्यसका सम्पादकले निरन्तर प्रहार गरेको हुन सक्ने बताए ।
साँसद रावलले साँघु साप्ताहिक पीतपत्रकारिताको भद्दा नमूना भएको बताए उनले पार्टी सदस्यताबाट उठेको रकममा अनियमितता गरेको भन्दै भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दैउनले आफू कैलाली जिल्ला ईन्चार्ज हुँदा जम्मा ४ हजार संगठित सदस्य रहेको र प्रत्येक सदस्यले बार्षिक २ सय ५० रूपैयाँका दरले लेवीतिरेपछि बार्षिक १० लाख हाराहारीमा शुल्क उठ्ने जानकारी दिए । उनले भने तर सवै संगठित सदस्यले सदस्यता नवीकरण गरेकोआफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
नेता रावलका अनुसार पार्टीका संगठित सदस्यबाट जिल्ला स्तरमा उठ्ने लेवी तिन तहमा पुग्नेसामान्य जानकारी नभएको र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर समाचार लेखेको प्रस्ट छ । केन्द्रीय सदस्य एवं साँसद रावलले जथाभावि समाचारलेखेर भ्रम श्रृजना गर्ने पत्रकार एवं सम्पादकलाई मर्यादित पत्रकारिता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै त्यस क्षेत्रका अगुवा पार्टी कार्यकर्ताले साँघु साप्ताहिकका सम्पादक र पत्रकारलाई बिभन्न प्रश्नको जवाव माग गरेका छन् ।
१– झपट रावल कैलाली इन्चार्ज हुँदा कैलालीमा ४ हजारको हाराहारीमा पार्टी सदस्य थिए । प्रति पार्टी सदस्यले वार्षिक रुपमा २ सय पचासका दरले पार्टीमा बुझाउथे । अनि ति सदस्यले बुझाएको पैसा कसरी एक करोड पुग्यो । आफुलाई देशको ठूलो पत्रकार ठान्ने सम्पादकलाई सामान्य जोड घटाउ पनि आउदैन ?
२–दोस्रो पार्टीका सदस्यले पार्टी कार्यालय वा कमिटीमा रसिद काटेर सदस्यता शुल्क बुझाउने हो । सो को खर्च र आम्दानी पार्टीमा सबैहिसाब हुन्छ । यसमा जोडेर कुनै नेताको बदनाम गर्न खोज्नु पित पत्रकारिता मात्र होइन, पत्रकारिताका नाममा ब्याकमेल बाहेक अरु केहुन्छ ?
३– तेस्रो समाचार स्रोत कुनै पनि पत्रिकाका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । समाचार स्रोतले समाचारलाई विश्वस्निय मात्र बनाउदैन । सञ्चारमाध्यमको गरिमा समेत बढाउने काम गर्दछ । साँघुमा लेखिने अधिकाँश समाचारले सो पत्रिका मात्र होइन जिम्मेवार पत्रकारितालाईसमेत लज्जीत बनाउने गरेको छ । हामी यसको खण्डन गर्दछौं र यस्तो तल्लो स्तरको पत्रकारिता गर्ने प्रबृत्ति प्रति खेद प्रकट गर्न चाहान्छौं?
४–आधुनिक जिम्मेवार पत्रकारितामा समाचारमा आरोति व्यक्तिको धारण समेत लिने गरिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको यस्तो अधिकारलाईपत्रकार आचार संहिताले पनि सुरक्षित गरेको छ । यसरी कपोकल्पित मात्र होइन, कसैलाई बदनामित बनाउने दुरासय बोकेर समाचारलेख्दा सम्बन्धित व्यक्तिको धारणा बुझ्ने प्रयास किन गरिएन ?
५ नेपाली पत्रकार र सञ्चार माध्यमले आचारसंहिताको उलंघन गरेमा कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो । काउन्सिलमा सदस्यगोपाल बुढाथोकी सम्पादक रहेको पत्रिकाले यति निकृष्ट पत्रकारिता गरिरहदा काउन्सिलको गरिमा माथि समेत धक्का लागेकोहामीलाई महसुस भएको छ । हामी आम नागरिकका तर्फबाट सो कुराको समेत प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।
एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही अब के हुन्छ ?
एमसीसी पाडो हो,इन्डो प्यासिफिक माउ भैंसी